Sidaan Ku Sadcinay - Xalaqada 1aad Al-Saadicuun Bil-Xaq
Barnaamijka Sidaan Ku Sadcinay 23 April 2020
Sidaan Ku Sadcinay - Xalaqada 1aad
Sidaan Ku Sadcinay ama "الطَّريقُ إلى الصَّدعِ" waa barnaamij taxane ah oo lagu wareysanayo xubno ka tirsan jamaacada Al-Saadicuun Bil-Xaq.
Waxa ay soo bandhigayaan sida ay jamaacadu ugu diyaargaroobaysay sadciga iyo waajibka ah in dadka xaqa la gaarsiiyo.
Xalaqadaan waxaa barnaamijka marti noogu ah Dr. Cismaan Cabdullahi Roble
Liis Barnaamijka Sidaan Ku Sadcinay
Sidaan Ku Sadcinay - Xalaqada 2aad
Sidaan Ku Sadcinay ama "الطَّريقُ إلى الصَّدعِ" waa barnaamij taxane ah oo lagu wareysanayo xubno ka tirsan jamaacada Al-Saadicuun Bil-Xaq. Waxaa barnaamijka loogu kuurgaliyaa geedi-socodka iyo sooyaalka jamaacada Al Saadicuun ...
Sidaan Ku Sadcinay - Xalaqada 3aad
Sidaan Ku Sadcinay ama "الطَّريقُ إلى الصَّدعِ" waa barnaamij taxane ah oo lagu wareysanayo xubno ka tirsan jamaacada Al-Saadicuun Bil-Xaq. Waxaa barnaamijka loogu kuurgaliyaa geedi-socodka iyo sooyaalka jamaacada Al Saadicuun ...